Lukaku oo jebiyay rikoodh uu horay u dhigay Ronaldo | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha Lukaku oo jebiyay rikoodh uu horay u dhigay Ronaldo
Lukaku oo jebiyay rikoodh uu horay u dhigay Ronaldo
(Milano) 03 Nof 2019 – Kaddib labadii gool ee uu Romelu Lukaku ka dhaliyay kooxda Bologna shalaytoole, xiddiga reer Belgian ee Inter u saftay ayaa jebiyay rikoodh uu horay Serie A uga dhigay Ronaldo Luis Nazario da Lima.
Lukaku ayaa haatan sidaa guud ahaan ku dhaliyay 9 gool 11 kulan oo 11 Serie A ah, wuxuuna sidaa ku barbarreeyay Ronaldo Wayne oo sidaa sameeyay fasal-ciyaareedkiisii 1-aad ee 1997-98-kii.
Laacibkii hore ee Manchester United ayaa goolal kasoo wada safay kooxda Lecce, Cagliari, Milan, Sassuolo (2), Parma iyo Brescia.
Halkan jookarkii reer Brazil ee Ronaldo uu isna goolasha ka kala dhaliyey Bologna, Fiorentina, Lecce (2), Lazio, Parma, Milan, Vicenza iyo Sampdoria wax noqday fasal-ciyaareedkii ugu fiicnaa 5 sanadood oo uu Inter la joogey oo uu qaarkood ilmeeyay.
Wuxuu Inter Milan ka dhaqaajiyay xilli-ciyaareedkii 2002 oo uu u waydaartey dhanka Real Madrid.
Previous articleWasiirka Warfaafinta oo UL kala dhex kacay Warbaahinta DF (Rag xilalkii laga qaaday & kuwo la magacaabay)
Next article”Is faham la’aanta dowlad walba la kowsatey ee ASWJ waa midda la degtey horumarka Galmudug!”